Izixhumanisi Zokuxhumanisa - Ama-Ellicott Dredges
Amasu Okwenziwayo Wokusungula
Kuyaziwa ngemigwaqo eyenzelwa ngokwakho usebenzisa i-Starwheel ™ self-propulsion drive esusa umsebenzi wokwenza ikhebuli ngamandla. Kususelwe eKansas, e-USA.
Ukuhambisa Udaka: Ukususa Amachibi Amakhulu angcolile.
I-Ellicott Dredges yakhile yonke imihlobiso eyisisekelo eyake yathungwa yiPanama Canal - kusukela ekwakhiweni kwasekuqaleni kuze kube namuhla.
I-US Army Corps of Engineers
Abakwa-Ellicott Dredges bahlinzekele imishini yokudonsa bonke kodwa munye we-Corps 'hopper dredges owakhiwe kuleli khulu leminyaka, kanye nosiki we-cutter dredges nawo.
Izinkontileka Zokukhiqiza - ENyakatho Melika
Umholi kazwelonke ku-Environmental Dredging, Backfill, and Capping. AbakwaCashman baphinde basebenzise iSondlo, ukubuyiswa kabusha kwebhishi, kanye ne-capital Improvement, kanye nokushayela phansi kwezilwandle kanye nokuqhuma kwasekhaya nakwamanye amazwe.
Imisebenzi Yangaphakathi Yesikhala
Zonke izigaba zokubuyiselwa kwamapayipi angenantambo nokubuyiselwa kwe-marina. Kususelwe eBraintree, Massachusetts USA.
Great Lred Dredge & Dock
Usonkontileka ohamba phambili wamazwe omhlaba. Amathathu ama-dernges ama-Ellicott asemkhunjini omkhulu we-Great Lakes Dredge kanye ne-Dock. Kususelwe e-Oak Brook, e-Illinois USA.
Inkampani esetshenziswayo edonsa amanzi neyakha amanzi eseRockport, eIndiana, esebenza ngokuphathwa kwezinto ezibonakalayo, ukuphathwa kwamachibi omlotha, ukulungisa umgwaqo ngamanzi, kanye nokuhlanza amapayipi.
Isixazululo sokudonswa kwasolwandle okufakazelwe esigxile kugxile ekuqhubekeni kolwandle kanye nokugcwaliswa kabusha komhlaba kwamaxhaphozi.
ISouthwind Construction Corp.
Sekuyiminyaka engaphezu kwe-20, iSouthwind Construction Corp. ibinikela izinsizakalo zokudonsa nezendawo ezungezile. Isekelwe e-Evansville, Indiana USA.
Abakhi Bokusabalalisa - Ezinye Izifunda
Inkampani Yezinkontileka zama-Arab
Inkampani enkulu kunazo zonke yokwakha eseMiddle East isebenzisa kuphela i-Ellicott dredges emikhunjini yazo.
Ukuhlinzekwa kwehholo kugxila kakhulu ekuhlukaniseni nasekuhlukaniseni umsebenzi wokwehlukanisa umphakathi. Amaphrojekthi wokudonsela phansi aqediwe kulo lonke elase-Australia, Isekelwe eMooloolaba, eQueensland, e-Australia.
Sebenzisa i-Ellicott barkwheel dredge ukukhipha usawoti endaweni enzima kakhulu - uLwandle Olufile.
Ama-Chemours asebenzisa indawo enkulu kunazo zonke yezokumbiwa phansi eNyakatho Melika yezimbiwa zamatshe zesanti (TiO2).
I-FMC Corporation isebenzisa i-Ellicott Wheel-Dragon dredge B890 ngemayini ye-ash ash.
Ngokubambisana ne-ASARCO, Inc., isebenza iMontana Resources, inkampani yezimayini eButte, Montana, USA.
I-Eagle North America
Inkontileka ephelele yokudonsa, yokususa amanzi kanye neyokwakha kabusha inkampani. Kususelwe eBoise, Idaho, USA (Ukusebenzela iWestern United States.)
Ezinye Izintshisekelo Zokwehlisa umoya
Umlingani ka-Ellicott Weminyaka Engaphezulu kwe-50 Ukunikela Ngezixazululo Amandla Ezifanele Zokukhulisa Ezimweni Zomhlaba Wonke
Izindawo zokugcina zika-Ellicott ezisePort Harcourt, eNigeria ezinamandla okuhambisa izingxenye zendawo endaweni yeLagos nsuku zonke.
Inikezela ngezinhlelo ezisebenza nge-PLC ezisebenzayo kubhakede nakuma-cutter suction dredges. Umthombo owodwa wezinto ezenziwa ngezezimboni nezinsiza zolwazi
IMakisur SA de CV
Umthombo okhethekile we-Ellicott Dragon® dredges eMexico.
Pakistan - I-Cres Guard Systems (Pvt) Ltd.
Umthombo okhethekile we-Ellicott Dragon® dredges ePakistan.
Umthombo okhethekile we-Ellicott Dragon® eGibhithe.
ETurkey - UGuler Marine
Umthombo we-Ellicott Dragon® dredges eTurkey
Ingilazi enkulu yaseMelika kanye nomakhiqizi weesihlabathi sombala bathembele kuma-Ellicott dredges ezimayini izinto zalo ezingavuthiwe.
ENtshonalanga Afrika - Logistics & Aid, SA
Umthombo we-Ellicott Dragon® dredges eFergophone, eNtshonalanga Afrika
I-Western Dredging Association (WEDA)
"Ukunciphisa Umnotho Onamandla Nendawo Ehlanzayo."